Nosy Cayman amin'ny fampandrenesana avo momba ny tranga Coronavirus COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nosy Cayman amin'ny fampandrenesana avo momba ny tranga Coronavirus COVID-19
Ny minisiteran'ny fahasalamana any amin'ny Nosy Cayman, ny sampan-draharahan'ny fahasalamam-bahoaka ary ny fitantanana ny sampandraharaha misahana ny fahasalamana (HSA) dia miomana amin'ny COVID-19 coronavirus. Hatramin'ny 5 martsa 2020, tsy misy tranga any amin'ny Nosy Cayman.
Ny fisokafan'ny Ivon-toerana misahana ny vonjy taitra nasionalin'ny nosy Cayman (NEOC) ny alarobia 4 martsa lasa teo dia nampivondrona ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny governemanta sy ny vondrom-piarahamonina hiomana amin'ny mety hahatongavan'ilay viriosy any Cayman. Ny NEOC dia mandrindra ny ezaka, anisan'izany ny fahasalamana, fitohizan'ny toekarena, serivisy fanamiana sy serivisy ary fanampiana. Ireo ekipa dia mivory farafahakeliny indray mandeha isan'andro hizara vaovao sy handray fanapahan-kevitra lehibe.
Na dia tsy misy tranga voamarina aza ao an-toerana, ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-bahoaka dia manohy miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny fahasalamana iraisam-pirenena mba hanara-maso sy hiomanana amin'ny valanaretina COVID-19.
Ny talen'ny mpitsabo, Dr. John Lee dia naneho hevitra hoe: "Miaraka amin'ny tranga voamarina fa COVID-19 any Florida, dia tena misy ny olana eo amin'ny mponina ao an-toerana ny Repoblika Dominikana sy St. Barts."
Nanampy izy hoe: "Rehefa maro ny tranga manamarina manerantany, dia avo ny loza ateraky ny coronavirus (COVID-19) tonga any amin'ny Nosy Cayman ary mivoatra haingana ny raharaha. Ilaina ny fepetra fisorohana toa ny fanasana tanana tsy tapaka sy ny fanalavirana ny hafa misy aretin'ny taovam-pisefoana. Ampitomboy ny halaviranao amin'ny olona hatramin'ny telo farafahakeliny farafahakeliny ary tsara kokoa ny enina metatra. Ny fananana drafitra ankohonana sy ankohonana dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fihanaky ny aretina ihany koa. ”
Namarana ny tenin'i Dr. Lee hoe: "Ny famerenana ny drafitra hiarovana ny mponina sy ny mpitsidika dia dingana iray mitohy. Miambina hatrany izahay mandritra ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon antoka amintsika mba hiarovana ny sisin-taninay ary izay tranga hafarana avy any ivelany dia tantana tsara mba hampihenana ny fiantraikany. "
Mitohy ny fifanakalozan-kevitra iraisam-pirenena. Ny alahady 1 martsa, Hon. Roy McTaggart, minisitry ny fitantanam-bola sy ny fampandrosoana toekarena, ary ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny governemanta sy ny fahasalamana, dia nisolo tena ny governemanta Cayman Islands tamin'ny alàlan'ny rohy video nandritra ny fivoriana manokana momba ny vonjy taitra tamin'ny fivorian'ny fivorian'ny governemanta (CARICOM). Nantsoina ny fivoriana hiadian-kevitra momba ny fanomanana isam-paritra sy ny valin'ny COVID-19.
Ho valin'ny fiomanana avo lenta sy valiny ho an'ny COVID-19 ataon'ireo mpandray anjara amin'ny nosy, ny minisitry ny fahasalamana, Hon. Dwayne Seymour, dia nanantitrantitra fa matoa mitombo ny isan'ireo tranga manerantany dia tsy maintsy miomana hatrany ny olona.
“Ilaina ny manavaka ny zava-misy amin'ny tantara foronina raha ny momba ny fampahalalana tsy miova momba ny virus. Tsidiho azafady hsa.ky ho an'ny zava-misy. Feno fankasitrahana aho amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-bahoaka, ny HSA, Hazard Management Cayman Islands ary ny mpiasam-panjakana misimisy kokoa izay miantoka ny fiarahamonina ho voaro sy vonona hatrany. Mamporisika anao aho mba hifampitsinjo sy hifanomana tsara, ary miambina amin'ny stigma sy ny tabataba, "hoy ny minisitra Seymour.
Premier, Hon. Alden McLaughlin, nisaotra ny Minisiteran'ny Fahasalamana tamin'ny fitarihany ary naneho ny fahatokisany ny dingana efa nalain'ny Nosy Cayman hiomanana amin'ny COVID-19.
“Fantatray fa maro ny olona manontany momba ny mety hahatafidiran'ity viriosy ity any Cayman. Manome toky azy ireo aho fa ny firenentsika dia misy rafitra sokajy manerantany izay misy ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitantanana ny loza. Miaraka amin'ny fihaonan'ny manam-pahaizana isan'andro, ny drafitra isaky ny zava-misy ary miaraka amin'ny fanohanan'ny governemanta ao ambadik'izy ireo, matoky aho fa hahavita ny vokatra farany azo trandrahana indrindra amin'ny fiarovana ny Nosy Cayman sy ny mponina ao aminy, ”hoy izy.
Minisitry ny asa ara-bola sy ny raharaham-bahiny, Hon. Hoy i Tara Rivers: “Vonona tsara ny HMCI ary vonona [XNUMX] handrindra ny valinteny nasionaly ho an'ny masoivoho maro. Ny zavatra niainana taloha dia nisedra olana ny fomba fiasanay sy ny fahafahan'ny maso ivoho mamaly. ”
"Ny indostrian'ny serivisy ara-bola dia manaraka ny drafitra fitohizan'ny asa aman-draharahany mba hahazoana antoka fa hitohy ny serivisy," hoy ny minisitra Rivers nanampy.
Minisitry ny fizahantany, Hon. Moses Kirkconnell, dia nanamarika fa ny coronavirus dia mametraka fanamby tsy manam-paharoa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana. Ny Minisitera sy ny masoivohony dia manohy miara-miasa akaiky amin'ny fahasalamam-bahoaka sy amin'ny tompon'andraikitra fiarovana mba hiarovana ny fahasambaran'ny mpitsidika sy ny mponina. "Ny minisiteran'ny fizahantany dia mifanerasera akaiky amin'ireo mpiara-miasa amin'ny sambo fitsangantsanganana ary manaraka ny fiatra-pitsaboana efa napetraka momba ny fipetrahana sambo sy mpandeha an-tsambo. Mihatra amin'ny mpitsidika stayover ihany koa ny fepetra mitovy amin'izany, "hoy izy.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny COVID-19 sy ho an'ny torolàlana amin'ny fiarovana tsara indrindra ny ankohonanao dia tsidiho www.hsa.ky/public-health/coronavirus na mifandraisa amin'ny Departemantan'ny Fahasalamam-bahoaka amin'ny 244-2621. Ny antsipiriany momba ny dingana raisin'ny governemanta hiadiana amin'ny aretina dia azo alaina ihany koa www.gov.ky/coronavirus .
Hihemotra amin'ny hetra ve ny Trano Fotsy Amerikanina noho ny fianjeran'ny coronavirus COVID-19?